Afhayeenka Madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin iyo La-taliyaha Amniga Qaranka Mareykanka Jake Sullivan, oo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo arrimaha gobolka | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Muqdisho(SONNA):-Afhayeenka Madaxweynaha Turkiga, Ibrahim Kalin iyo La-taliyaha Amniga Qaranka ee Mareykanka, Jake Sullivan, ayaa ka wada hadlay arrimo ku saabsan xiriirka labada dal iyo arrimaha gobolka xili ay ku wada hadlayeen khadka Telephone-ka maalinimadii jimcaha.
Labada mas’uul ayaa ka wada hadlay xiriirka siyaasadda iyo dhaqaalaha, iskaashiga dhanka gaashaandhigga, arrimaha caalamka iyo gobolka, sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Turkiga.
Waxay sidoo kale ka wadahadleen xaaladda bini’aadantinimo iyo siyaasadeed ee Afgaanistaan, midnimada dhuleed ee Suuriya iyo nadiifinta argagixisada, geeddi-socodka siyaasadda iyo doorashooyinka soo socda ee Liibiya, Nagorno-Karabakh, horumarinta xuduudaha Ukraine, dhibaatada muhaajiriinta ee xuduudaha Poland-Belarus iyo horumarka. ee Bariga Mediterranean-ka.
Waxaa sidoo kale la isla soo qaaday faafaahin ku saabsan habka istiraatijiyadeed ee wadajirka ah ee lagu heshiiyey kulankii dhex maray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka qeyb galayay shir madaxeedka G20 ee Rome.
Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Maraykanka Emily Horne ayaa sidoo kale bayaan uu soo saaray ku sheegay in Kalin iyo Sullivan “ay ka wadahadleen tillaabooyinka xiga ee iskaashiga laba geesoodka ah ee Maraykanka iyo Turkiga” ka dib kulankii Biden iyo Erdogan ee Rome 31 Oct.
Previous articleGuddiga doorashooyinka heer federaal oo fariin u diray maamulada Jubbaland, Puntland iyo Hirshabeelle
Next articleCiidamada xoogga dalka oo howlgal ka dhan ah argagixisada ka fuliyay gobolka Sh/hoose